Almond makuki ane apricot jam | Bezzia
Almond makuki ane apricot jam
Izvi almond cookies nejamu maapurikoti ari nyore kugadzirira, zvekuti hauzombove nehusimbe hwekuabika. Iwe unoshandisa mudziyo mumwe chete kuzviita uye kuzvimisikidza, maoko ako anokwana. Iwe unogona zvakare kuvazadza nejamu iwe yaunofarira zvakanyanya. Haunzwi kuda kuvaedza futi?
Makuki akavakirwa paoatmeal, almond nemafuta emuorivhi uye anorungwa nepiniki yeturmeric uye pini yepepuru. Havana shuga pakati pezvakagadzirwa neshuga kana chero chimwe chinotapira. Uye havadi izvozvo; shuga iri mujamu inokwana kutapisa uku kuruma. Kutsvaga dzimwe sarudzo dzisina shuga? Edza izvi banana oatmeal makuki.
1 mukombe weoatmeal
1 mukombe wevhu maarumondi
Mazuva mashanu akakwenenzverwa
5 mashupuni emamwe maorivhi emhandara emafuta
1/2 mukombe wearimondi chinwiwa
1/4 teaspoon mutsvuku
2/3 teaspoon kubika soda
Soak misi mumvura inopisa kwemaminitsi mashanu. Wobva waadhonza uye uchengetedze.
Pre-kupisa huni pa180ºC uye tara iyo yekubheka tireyi nemapepa echinyorwa.
Mugirazi re blender, isa zvese zvinoshandiswa kunze kweiyo apricot jam. Kubvarura kumusoro uwane mukanyiwa wakafanana.
Zora maoko ako zvishoma uye fomu mabhora pamusoro pehukuru hwenzvimbo ine zvidimbu zvidiki zvehupfu. Zviise pabheka, uchichengeta chinhambwe pakati pazvo.
Paunenge wapedza nehupfu, uchishandisa index index yako, pfuurira pasi pane imwe yebhora ku gadzira gomba pakati.
Yakaputirwa nejamu buri gomba uye gadzira makuki kwemaminetsi makumi maviri neshanu kana kusvika bhuru yegoridhe.
Bvisai muchoto uye muvarege vatonhore padanda vasati vazvichengeta mu mudziyo usina mweya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Desserts » Almond makuki ane apricot jam
Maitiro ekudzidza kukunda kutadza
Chii chinonzi kupinda uye tinofanirwa kuzviita riini?